Mahazo manana rivotra ve ny lehilahy? Ahoana ny fanakanana ny orinasan-tsolika robotic - vondrona mikambana Kimroy Bailey
General News, Angovo azo havaozina
Ny fahitanay momba ny angovo manerantany
Azonao alaina ve ny rivotra? Azonao atao ve ny mividy? Mipoitra ve any amin'ny firenena voafantina? Mitoetra ao amin'ny League of Arab States ve ny rivotra? Araka ny angovo Energy Association Association, ny 69% amin'ny solika eran'izao tontolo izao dia vokarina avy amin'ny firenena 10 anisan'izany i Etazonia, Saudi Arabia, Russia ary Canada. Saingy tsy toy ny angovo entin'ny rivotra sy voajanahary Gasikara dia tsy voatery ho any amin'ny toerana iray na firenena manokana. Ny rivotra nifofofofo avy amin'ny zorony efatra manerana ny Tany manontolo.
Ny fanamboarana sy famokarana no fototry ny fitomboan'ny firenena ary ny haitao ny teknolojia no mpanova ny lalao izay afaka mampihena ny sehatra filalaovana eo amin'ireo firenena manamboatra. Ary Hey! ho an'ireo firenena namoaka ny tenany ary namela ny fanamboarana tany Alemana, Etazonia, Etazonia na ilay antsoina hoe goavambe mpanamboatra China, ny teknolojia vaovao avy ao amin'ny vondrona Group ankehitriny dia midika fa ny famokarana vidiny ambany dia mety hitranga na aiza na aiza amin'ny fotoana rehetra. Raha tsorina dia mila herinaratra ny famokarana, ary mampiasa ny teknolojia rivotra robotic mialoha izay manome anay hery eo amin'ny vozotra lavitra indrindra ny ala.
Ary inona no dikan'izany ho anao, firenena iray an-dalam-pandrosoana, mpamboly kely, tompon-trano manam-bola antrano misy hevitra maromaro?
Ny hoe mamokatra dia midika fa afaka mividy sy afaka mivarotra ianao dia midika hoe mahazo vola ianao ary afaka mahazo vola dia mahatonga antsika ho sambatra, faly. Ary tsy tianay ny hahazoanao vola amin'ny tanana iray ary handany izany amin'ny fanafarana solika na famokarana angovo mahery vaika. Tianay ny hahazoanao sy mamela lova ho an'ny zanakao! Mampiasa ny vahaolana azo angovo azo havaozina dia azonao atao ny mampitombo ny volanao ary tsy mifaninana fotsiny fa mahazo tombony, tena mahasoa. Makà fotoana hijerena ny fahitana izao tontolo izao, iza ity isika, ity no ijoroanay. Tianay i Arabia Saodita, Rosia, Shina ary ireo 'goavambe' rehetra amin'ny resaka angovo sy famokarana amin'izao fotoana izao saingy maniry mafy ny hiparitaka ny koba izahay ary mamela ny salanisan'i Joe hanitatra ny harony. Ahhh, Toy ny any an-danitra, dia ho tahaka ny et on an-tany.
Ny vondrona Kimroy Bailey dia namolavola teknolojia rivotra robotic izay afaka manamboatra rivotra ho lasa angovo azo ampiasaina na dia any amin'ny faritry ny rivotra aza. Ity teknôlôjia ity dia mamela ny 38% amin'ny faritra ambany eran-tany manerantany izay haingam-pandeha amin'ny rivotra izay ambany loatra ny famokarana angovo ampy ho fanamafisana ny fampiasam-bolan'ny teknolojia.
Ny tanjon'ny lalamben'ny rivotra robotic dia ny famelana ny atobin-drivotra madinidinika kely, afaka mamoaka angovo betsaka na dia amin'ny hafainganam-pandeha mahery aza. Ity dia manokatra tokoa ny isan'ireo firenena, tanàna, faritany, faritra ary faritra izay azon'ny angonin-drivotra ampiasaina. Araraoty ny làlantsika?
Nahoana isika no miahy ny angovo? - Namahana ny Elefanta.
Izahay dia orinasam-pifandraisana izay mampifanaraka ireo vokatra angovo azo havaozina (Solar & Wind) miaraka amin'ny Robotics, Intelligence Artificial ary teknolojia sensor. Mpanamboatra sy mpamokatra ny tenantsika izahay miaraka amina vokatra marobe ankehitriny eny an-tsena, eo ambanin'ny tranoben'ny orinasa. Rehefa maka vokatra avy amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ianao, famolavolana, Prototype, fitiliana Beta, mankany amin'ny Mass Manufacturing dia tsapanao ny fihenan'ny fandaniana herinaratra isaky ny dingana. Raha tsy vahaolana ho an'ny angovo azo havaozina natambatra ao amin'ny maodelin'ny raharaham-barotra, maro amin'ireo vokatra vokarintsika no nijanona ho hevitra ary nidina ihany koa isika tamin'ny fitomboan'ny vidin-jiro tsy tapaka.
Amin'ny maha mpanamboatra mampiasa teknolojia nomerika ao amin'ny habaka angovo azo havaozina sy Robotika, fantatsika ny moto izay atrehan'ireo mpanamboatra hafa - afaka mifampiresaka isika. Rehefa manamboatra amin'ny herinaratra ambony ianao dia lasa miahiahy haingana be ny vidin'ny angovo. Izay mpamokatra vaventy amin'ny sehatry ny sehatra rehetra dia hilaza aminao fa ny fanaovana varotra sy manaparitaka ny vokatra, ny entana ary ny serivisy ary ny fitaterana an'izao tontolo izao dia mitaky angovo betsaka.
Koa maninona ny sehatry ny angovo no mbola Dinosaur havana raha oharina amin'ireo dingana rehetra natao ao amin'ny sehatra Tech?
Ny maodelin'ny orinasa goavan'ny solika dia ny fivarotana menaka fotsiny dia miala aina amin'ny tombony; tsy mila manavao, tsy mila manosika ny fanavaozana. Ny mampihomehy dia, isaky ny misy ny fikarohana natao dia manondro fehezam-potoana amin'ny famatsiana solika izao tontolo izao, ireo orinasa ireo dia mahita ny porofo satria ny faritry ny solika iray dia nifarana taorian'ny iray. Ny valiny dia teo alohan'izy ireo hatrany, Andriamanitra dia namorona ny rivotra sy ny masoandro tamin'ny andro voalohany am-piariana, dia miaraka amintsika hatrany ireo loharano voajanahary ireo. Ny fotoanantsika dia mampiasa ny loharanon'ny lanitra handrosoana ny olona rehetra fa tsy ny mpanankarena ihany. Rehefa kaonty 10 no mandany ny 70% -n'ny solika eran'izao tontolo izao dia mitazona ny fahatongavan'ireo firenena 185 hafa izy ireo. Azon'izy ireo atao ny mametraka ny vidiny, mifehy ny tsena ary mifehy varotra. Ka maninona no manavao, maninona no miova, maninona no mivoatra?
Ny vondrona Kimroy Bailey dia eto mba hamoaka ny fivoarana, ny tanjonay dia ny hanomezana tsara ny vidin'ny angovo ho an'ny mpanamboatra. Ny orinasa ankehitriny dia manana milina masinina ho an'ny fanamboarana dizitaly fa taloha, fomba arbaika amin'ny famokarana herinaratra. Isika no mitana andraikitra lehibe indrindra amin'ny fanandratana ny safidy azo avy amin'ny herinaratra herinaratra tsy lavitra ny solika sy ny entona.
Izany no antony nanangananay ny orinasantsika manodidina ireo sehatra roa an'ny angovo azo havaozina sy angovo. Ny sandrin'ny vondronay, ny Energy Renewable Energy sy Robotics izay miasa eo an-tànana mba hampifanaraka ny sehatra angovo dinosaurus taloha namboarina tamin'ny menaka nanomboka ny revolisiona indostrialy tamin'ny taona 1760 ary natondrony ho amin'ny taonjato faha-21. Ary maminavina? Tsy fahitana 20 taona intsony izao, anio, izao FARANY!
Ekenay fa nisy ny dian-dàlana ary mbola hisy ny tohatra vita amin'ny sehatry ny angovo hampihenana ny vidin'ny herinaratra. Tsy nahomby haingana anefa izany. Ny turbine rivotra tahaka ny noforonin'ireo tantsambo tamin'ny 1600 sy 4 taonjato taty aoriana dia tsy dia niova firy. Mila fahitana lehibe kokoa isika, mihevitra ny sambo mandeha amin'ny herinaratra havaozina, fiaramanidina, firenena iray manontolo alain'ny herin'ny rivotra sy ny haitao atsinanana. Ny vondrona Kimroy Bailey eto dia tsy vitan'ny hoe manafaingana ny hafainganam-pandehan'ny indostria havaozina fa mba hahazoana antoka fa azo antoka ny mpanjifa. Ny vokarintsika vaovao dia ny turbine rivotra robotic dia tsy hanova ny famokarana ny rivotra fotsiny fa hanala ny sakana hidirana ireo mpanamboatra sy tompona trano handray sambo ary hampiasa hery amin'ny rivotra.
22Mey Enga anie 22, 2014
Robotika fahavaratra sy toby fanavaozana
Kitiho ny fisoratanao anio 0r CALL - 834-5971 (Amin'ny fotoana rehetra) Tsindrio ny afisy etsy ambany mba hisoratra anarana Tsindrio ny taratasy etsy ambony ... hamaky bebe kokoa
Mpandray an-trosa: Loka ho an'ny praiminisitra ho an'ny zava-bita iraisam-pirenena
Kimroy Bailey dia natolotry ny Most Hon. Portia Simpson-Miller ho an'ny zava-bita iraisam-pirenena tamin'ny fampisehoana an-tsehatra tamin'ny 2013 hamaky bebe kokoa
Earth Hour Karaiba
TeamKB, fantaro ny fomba ahafahanao manohana ny Caribbean Earth Hour 2013 amin'ny famakiana ny lahatsoratra eto ambany. Caribbean Earth Hour dia ... hamaky bebe kokoa